उधारो संविधान संशोधनमा हाम्रो सहमति छैन : अध्यक्ष यादव | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
उधारो संविधान संशोधनमा हाम्रो सहमति छैन : अध्यक्ष यादव
काठमाडौं, २८ कात्तिक- संघीय गठबन्धनका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको टोलीले सोमबार बिहान कार्यालय खुल्नासाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटघाट गर्ने भएका छन् । तर, यो वार्ताचाहिँ होइन । उपेन्द्र यादवको परिभाषामा यसलाई डेलिगेसन भन्दा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको संविधान संशोधनको ड्राफ्टलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा रहेका गठबन्धनका नेता यादवसँग संक्षिप्त कुराकानी-
सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, सरकारसँग वार्ता हुन लागेको हो ?
हैन । भोलि संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखिएको हो । यो वार्ता होइन । प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनभएको होइन, हामीले आफैं भेटेर ज्ञापनपत्र दिन लागेका हौं । यसलाई डेलिगेसन भनौं न ।
के विषयमा डेलिगेसन ?
संविधान संशोधनको विषयमा ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेका छन्, तपाईहरुले त्यसैलाई माने हुँदैन ? संविधान संशोधन चाहनुभएको हो भने किन त्यो प्रस्ताव मान्य छैन भन्नुभएको त उसोभए ?
हेर्नुहोस् संघीयताको नाम र प्रदेशको सीमांकनको काम आयोगलाई जिम्मा दिने कुरा त्यो झारा टार्ने कुरा हो । त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । संघीयता, पहिचान र समावेशिताजस्ता कुराहरुलाई हल नगरिकन यो मुलुकमा यो संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यसलाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने ?
पहिले पनि संशोधनको नाममा लागि संशोधन गरियो । पहिले पनि दुईवटा धाराहरु संशोधन गरिएको थियो, त्यसबाट के भयो ? जुुन मुलुकको समस्या हो, त्यसलाई हल नगरिकन गरिने संशोधनको कुनै अर्थ छैन । यो त जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो, यसो गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । समस्यालाई हल गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।
झारा टार्ने, झुक्याउने, धोका दिने र प्रपञ्च गर्ने काम धेरै भइसक्यो । यस्तो जालझेल र प्रपञ्चबाट माथि उठेर संघीयता, समावेशिता, पहिचान र राज्य पुनसंरचनामा हामी संघीय गठबन्धनको सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ
समस्या हल गर्ने गरी भन्नाले कसरी गर्ने त संविधान संशोधन ?
मधेसका मुद्दा, आदिवासी जनजातिका मुद्दा र दलितका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । यस्तो संशोधन उधारो त हुँदैहुँदैन नि । झारा टार्ने, झुक्याउने, धोका दिने र प्रपञ्च गर्ने काम धेरै भइसक्यो । यस्तो जालझेल र प्रपञ्चबाट माथि उठेर संघीयता, समावेशिता, पहिचान र राज्य पुनसंरचनामा हामी संघीय गठबन्धनको सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । र, मुलुकको समस्यालाई हल गर्नुपर्छ ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि बनाएको ड्राफ्ट पनि नमान्ने, अनि मधेसी नेताहरु आफूले पनि ड्राफ्ट तयार पार्न नसक्ने, यस्तो चाँहि किन ? तपाईहरुसँग संविधान संशोधनको स्पष्ट खाका छ ?
आवश्यक पर्‍यो भने हामी सरकारलाई ड्राफ्ट दिन तयार छौंं । हामी पूरै तयार छौं ।
सरकारले तयार पारेको ड्राफ्टमा चाँहि कहाँनेर चित्त बुझेन तपाईहरुलाई ?
हामीसँग सहमति नगरी तयार पारिएको ड्राफ्ट वा ल्याएको संशोधनको प्रस्तावले राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न नसक्ने संशोधनको के काम ?
सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर के भन्नुहुन्छ ? आन्दोलन घोषणा गर्ने जानकारी दिनुहुन्छ ?
आन्दोलनको घोषणा अहिले हामी गर्दैनौं । उहाँलाई केही टाइम दिइन्छ ।
हामीले भनेको अहिलेको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रोभिजन लैंगिक हिसाबले विभेदकारी छ । यसमा लैंगिक असमानता र विभेद छ । तर, अस्ति भर्खरै सार्वजनिक भएको अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव हाम्रो प्रस्ताव होइन । प्रचण्डजीको प्रस्ताव होला
सरकारले संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेका बेला तपाईहरु यसरी सधैं हलो अड्काउने काम किन गर्नुहुन्छ ?
हामीले कहाँ हलो अड्कायौं ? सरकारलाई संविधान संशेाधन गरेर सच्याउ भनेको हो । हामीले त संविधानलाई खारेज गर भनेको छैन नि । हलोचाँहि कहाँ अड्कियो ?
पहिले पनि संविधान संशोधन भयो, त्यसलाई पनि मान्नुभएन, अहिले पनि गर्न खोज्दा मान्दैनौं भन्नुहुन्छ…
त्यो संशोधन गरेको के थियो ? भूगोल र जनसंख्या थियो, जनसंख्या र भूगोल बनाइयो । त्यो संशोधन भयो त ? त्यसले कुन सा तात्विक अन्तर पार्छ ?
सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावमा तपाईहरुको असहमति चाँहि कहाँनेर हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्न मिल्दैन ?
सरकारले ल्याएको प्रस्तावै वाहियात छ । संघीयताको समस्या अहिले तत्कालै हल गर्नुपर्छ । त्यसलाई आयोगको जिम्मा लगाएर हुन्छ ? दोस्रो कुरा के हो भने त्यो पूस्तावमा समावेशीताको कुरा छैन । पहिचानको कुरा छैन । तेस्रो, नागरिकताको पुरानो प्रावधानलाई राख्ने भनेको छ । यसरी समस्या हल हुँदैन । हल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्‍यो ।
अहिलेको को अंगीकृत नागरिकताको फण्डाचाँहि के हो नि ?
हामीले भनेको के हो भनेदेखि अहिलेको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रोभिजन लैंगिक हिसाबले विभेदकारी छ । यसमा लैंगिक असमानता र विभेद छ । नेपाली नागरिकतालाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न पाइँदैन ।
अस्ति भर्खरै सार्वजनिक भएको अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव चाँहि कसको हो ?
त्यो हाम्रो प्रस्ताव होइन । त्यो चाहिँ प्रचण्डजीको प्रस्ताव होला, हाम्रो होइन । सरकारले फैलाएको हल्लामात्रै हो त्यो ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सवालमा चाँहि प्रचण्डले अघि सारेको प्रस्ताव ठीक छ ?
राष्ट्रिय सभामामात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा, त्यो राजनीतिक होस् वा प्रशासनिक, त्यसमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यो जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ । प्रचण्डजीले राखेको प्रस्तावमा यो छैन । त्यसैले त्यो मान्य छैन । यी सबै कुराहरु राखेर प्रस्ताव आओस् न ।
अब संविधान संशोधनमा तपाईहरु सहमत नहुने हो भने के गर्ने त ? आन्दोलनमा जाने ?
समस्या सम्वोधन भएन भने आन्दोलन हुन्छ । दास बनेर जनता बस्दैनन् ।
अब मधेसी मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ?
तत्कालै त्यस्तो निर्णय छैन । तर, के हो भन्दाखेरि सरकारले संशोधन प्रूस्ताव हाम्रो सहमति अनुसार मुलुकको समस्या सम्वोधन गर्नेगरी ल्याएन भने त्यसपछि हामी सोच्छौं ।
प्रकाशित: २०७३ कार्तिक २८ गते ।
Posted by admin on Nov 13 2016. Filed under Breaking News, अन्तरवार्ता, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
2 Comments for “उधारो संविधान संशोधनमा हाम्रो सहमति छैन : अध्यक्ष यादव”
l7Z3E2 Thanks so much for the post. Really Cool.
July 13, 2017 - 6:43 pm
qbfXzr Thanksalot for the post.Much thanks again. Will read on